တည်နေရာ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့လောင်ဂျီကျူ ၉၂.၁၀ ဒီဂရီနှင့် ၁၀၁.၁၁ ဒီဂရီကြား၊ မြောက်လတ္တီတွဒ် ၀၉.၃၂ ဒီဂရီနှင့် ၂၈.၃၁ ဒီဂရီကြားတွင် တည်ရှိပြီး၊ အရှေ့တောင်အာရှ၊ တောင်အာရှနှင့် အရှေ့အာရှတို့၏ အချက်အချာကျသော နေရာဖြစ် ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ အရှေ့ဘက်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် လာအိုနိုင်ငံ ၊ မြောက်ဖက်တွင် တရုတ်နိုင်ငံ၊ အနောက်ဖက်တွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနှင့် အိန္ဒိယနိုင်ငံတို့ဖြစ်ပါ သည်။ မြန်မာနိုင်ငံ၏ တောင်ပိုင်းတွင် ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်ရှိပြီး အိန္ဒိယသမုဒ္ဒရာနှင့်လည်း ဆက်စပ်တည်ရှိ ပါသည်။
မြေမျက်နှာသွင်ပြင် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဧရိယာမှာ (၆၇၇၀၀၀) စတုရန်းကီလိုမီတာ (၂၆၁၂၂၈ စတုရန်းမိုင်)ဖြစ်ပြီး အရှေ့အနောက်သို့ ၉၃၆ ကီလိုမီတာ (၅၈၂)မိုင် ၊ မြောက်မှတောင်သို့ ၂၀၅၁ ကီလိုမီတာ (၁၂၇၅ မိုင်) ရှိ ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံသည် အရှေ့တောင်အာရှကျွန်းပေါ်ရှိ အကြီးဆုံးနိုင်ငံဖြစ်ပါသည်။
မြောက်ဖက် ၊ အရှေ့ဖက်နှင့် အနောက်ဖက်တို့တွင် တောင်တန်းများ ၀န်းရံလျက်တည်ရှိပါသည်။ တောင်တန်းများအကြား မြေပြန့်ပေါ်တွင် ဧရာဝတီ ၊ ချင်းတွင်းနှင့်စစ်တောင်းမြစ်ဝှမ်းဒေသများရှိပြီး နိုင်ငံ၏ အသက်သွေးကြောဖြစ်သည့် စိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းကို အများဆုံးလုပ်ကိုင်ကာ လူဦးရေအများအပြား အခြေချ နေထိုင်ကြပါသည်။
မြန်မာနိုင်ငံ၏ နယ်စပ်မှာ ၆၁၅၉ ကီလိုမီတာရှည်လျားပြီး ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံနှင့် ၂၇၁ ကီလိုမီတာ (၁၅၂ မိုင်)၊ တရုတ်နိုင်ငံနှင့် ၂၂၀၄ ကီလိုမီတာ (၁၃၇၅ မိုင်)၊ ထိုင်းနိုင်ငံနှင့် ၂၁၀၇ ကီလိုမီတာ (၁၃၁၄ မိုင်) ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံနှင့် ၁၃၃၈ ကီလိုမီတာ (၈၅၇)မိုင် ၊ လာအိုနိုင်ငံနှင့် ၂၃၈ ကီလိုမီတာ (၁၂၈ မိုင်) အသီးသီးထိစပ် လျက်ရှိပါသည်။
ရာသီဥတု မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရာသီဥတု(၃)မျိုးရှိရာ နွေရာသီမှာ မတ်လ မှ မေလအထိ ၊ မိုးရာသီမှာ မေလမှ အောက်တိုဘာလအထ်ိနှင့် ဆောင်းရာသီမှာ နိုဝင်ဘာလမှ ဖေဖော်ဝါရီလအထဖြစ်ပါသည်။ မြန်မာနိုင်ငံ သည် အပူပိုင်းမုတ်သုတ်ရာသီဥတုမျိုးရရှိပြီး ရာသီဥတုအခြေအနေမှာ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်အရ တစ်နေရာ မှ တစ်နေရာသို့ မတူညီပဲကွာခြားလေ့ရှိသည်။ ဥပမာအားဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသတွင် နှစ်စဉ်မိုး ရွာသွန်းသော မိုးရေချိန်မှာ လက်မ ၄၀ အောက်သာရှိသော်လည်း ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်းနှင့် တနင်္သာရီကမ်းရိုး တန်းတို့တွင် လက်မ ၂၀၀ ကျော် ရွာသွန်းလေ့ရှိပါသည်။
မတ်လမှ ဧပြီလအတွင်း မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်း ဒေသ၏ အပူချိန်မှာ ၁၁၀ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၄၃.၃ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)ရှိသော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းဒေသများတွင် ၉၇ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၃၆.၁ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်)ရှိကာ ရှမ်းကုန်းမြင့်တွင် ၈၅ မှ ၉၅ ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက် (၂၉.၄ မှ ၃၅ ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်) ရှိသည်။ လေတိုက်ခတ်မှုအနေအထားအရ ကမ်းခြေဒေသများတွင် ပြင်းထန်သောမုန်တိုင်းများ ရိုက်ခတ်ခံရလေ့ရှိသည်။ ၂၀၀၈ ခုနှစ်၊ မေလ ၂ ရက် နေ့တွင်တိုက်ခတ်ခဲ့သည့် နာဂစ် ဆိုက်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည် မြန်မာ့သမိုင်းတွင် အဆိုးရွားဆုံး သဘာဝ ဘေးအန္တရာယ်ပင်ဖြစ်သည်။
သမမျှတသည့် ရာသီဥတုအခြေအနေကောင်းများ ဖြစ်ပေါ်စေရေးအတွက် နိုင်ငံတော်သည် သစ်တောများထိန်းသိမ်းခြင်းနှင့် မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းဒေသများတွင် အပူပိုင်းဒေသ စိုပြေရေးလုပ်ငန်းများကို အဓိကဦးစားပေးဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသည်။ လူဦးရေ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း ၁၀၀ ကျော်မှီတင်းနေထိုင်ကြ ပါသည်။ အဓိကတိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုကြီးများမှာ ကချင် ၊ ကယား ၊ ကရင် ၊ ချင်း ၊ ဗမာ ၊ မွန် ၊ ရခိုင် ၊ ရှမ်း တို့ဖြစ်ပါသည်။
၂၀၁၄ - ၂၀၁၅ ခုနှစ်စာရင်းများအရ နိုင်ငံ၏ စုစုပေါင်းလူဦးရေမှာ (၅၁.၄) သန်းရှိပါသည်။ သဘာဝသယံဇာတအရင်းအမြစ်များ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေနံနှင့်သဘာဝဓါတ်ငွေ့၊ သစ် ၊ ဇင့် ၊ ကြေးနီ ၊ ခဲ ၊ ကျောက်မီးသွေး ၊ ထုံးကျောက် ၊ အဖိုးတန်ကျောက်မျက် ၊ ရေအားလျှပ်စစ်စသည့် သဘာဝသယံဇာတ အရင်းအမြစ်များ ပေါများ ကြွယ်ဝပါသည်။ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်များ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆန်စပါး ၊ ပဲအမျိုးမျိုး ၊ ဆီထွက်သီးနှံ ၊ သစ်သီးဝလံနှင့် ဟင်းသီး ဟင်းရွက် ၊ ကြံ ၊ သစ်မာ ၊ ရေထွက်ကုန် စသည်တို့ထွက်ရှိပါသည်။
စက်မှုလုပ်ငန်းများ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် လယ်ယာထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ ပြုပြင်ထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အထည် အလိပ်နှင့် အ၀တ်အထည်လုပ်ငန်း ၊ ရေနံနှင့် သဘာဝဓါတ်ငွေ့လုပ်ငန်း ၊ ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက်လုပ်ငန်း ၊ သစ်နှင့်သစ်အချောထည်လုပ်ငန်း ၊ ကြေးနီ၊ သံ ၊ တန်စတင်ထုတ်လုပ်ရေးလုပ်ငန်း၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံး ပစ္စည်းများ ထုတ်လုပ်သည့် လုပ်ငန်း ၊ ဆေးဝါးလုပ်ငန်း ၊ ဓါတ်မြေ သြဇာနှင့် ဘိလပ်မြေလုပ်ငန်း စသည်တို့ လုပ်ကိုင်ကြပါသည်။
အဓိကပို့ကုန်ပစ္စည်းများ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံမှ စိုက်ပျိုးရေးထွက်ကုန်ပစ္စည်းများ၊ သစ်တောထွက်ပစ္စည်းများ ၊ သဘာဝ ဓါတ်ငွေ့၊ သတ္တုတွင်းထွက်ပစ္စည်းများ ၊ ရေထွက်ပစ္စည်းများ ၊ အဝတ်အထည်၊ ကျောက်စိမ်းနှင့် ကျောက်မျက် စသည်တို့ကို အဓိကတင်ပို့ပါသည်။ အဓိကသွင်းကုန်ပစ္စည်းများ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသည် ရေနံစိမ်း ၊ လောင်စာဆီ ၊ စက်ပစ္စည်းနှင့် အပိုပစ္စည်းများ ၊ ပို့ဆောင်ရေးပစ္စည်းများ၊ ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းများ၊ ဓါတ်မြေသြဇာ ၊ ဘိလပ်မြေ၊ စားသုံးဆီ၊ စားသောက်ကုန်များ ၊ ချည်မျှင်နှင့် ပလပ်စတစ်စေ့များ စသည်တို့ကို ပြည်ပမှ အဓိကတင်သွင်းပါသည်။
ငွေကြေး ကျပ် ၊ ပြား (တစ်ကျပ် = ပြားတစ်ရာ ) ဘဏ္ဍာနှစ် ဧပြီလ ၁ ရက်နေ့မှ မတ်လ ၃၁ ရက်နေ့အထိ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင်ပါဝင်ခြင်း ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံသည် အောက်ဖော်ပြပါ နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းများတွင် အဖွဲ့ဝင် အဖြစ် ပါဝင်ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါသည် - APT, ARF, ADB, ASEAN, BIMSTEC, CP, EAS, FAO, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, ICRM, IDA, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, IMF, IMO, Interpol, IOC, ISO (correspondent), ITU, NAM, OPCW (signatory), SAARC (observer), UN, UNCTAD, UNESCO, UNIDO, UPU, WCO, WHO, WIPO, WMO, WTO. တိုင်းဒေသကြီးနှင့်ပြည်နယ်များ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းဒေသကြီး (၇)တိုင်းနှင့် ပြည်နယ် (၇) ပြည်နယ်ရှိပါ သည်။
တိုင်းဒေသကြီးများမှာ ဧရာဝတီတိုင်းဒေသကြီး ၊ ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မကွေးတိုင်းဒေသကြီး ၊ မန္တလေးတိုင်း ဒေသကြီး ၊ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး ၊ တနင်္သာရီ တိုင်းဒေသကြီး ၊ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးတို့ ဖြစ်ပါသည်။ ပြည်နယ်များမှာ ကချင်ပြည်နယ် ၊ ကယားပြည်နယ် ၊ ကရင်ပြည်နယ် ၊ ချင်းပြည်နယ်၊ မွန်ပြည်နယ် ၊ ရခိုင်ပြည်နယ် ၊ ရှမ်းပြည်နယ်တို့ ဖြစ်ကြပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုပေါင်း တစ်ရာကျော်မှီတင်းနေထိုင် ကြပါသည်။
ကိုးကွယ်သည့်ဘာသာများ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံတွင် ရှေးယခင်ကတည်းက ဘာသာအမျိုးမျိုးကို လွတ်လပ်စွာ ကိုးကွယ်ခဲ့ကြပါသည်။ ရာခိုင်နှုန်းအားဖြင့် ဗုဒ္ဓဘာသာ ကိုးကွယ်သူ ၈၉ . ၃ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ခရစ်ယာန် ၅.၆ ရာခိုင် နှုန်း ၊ အစ္စလာမ် ၃.၈ ရာခိုင်နှုန်း ၊ ဟိန္ဒူ ၀.၅ ရာခိုင်နှုန်း ၊ နတ်ကိုးကွယ်မှု ၀.၂ ရာခိုင် နှုန်းနှင့်အခြား ၀.၆ ရာခိုင်နှုန်း အသီးသီးဖြစ်ကြပါသည်။ ဘာသာစကား ရုံးသုံးဘာသာမှာ ဗမာစကားဖြစ်ပါသည်။ တိုင်းရင်းသားလူမျိုးစုများတွင် ကိုယ်ပိုင်ဘာသာစကား အသီးသီးရှိကြပါသည်။